Andininy Andrew K Kirk momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Andrew K Kirk
Alakamisy, Aogositra 2, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Andrew K Kirk
The Psychology of Social Networking dia infographic mahafinaritra natolotry ny ekipa antsika tao amin'ny psychologydegree.net. Tafiditra ao anatin'izany ny statistika mahazatra anao momba ny fampiasana media sosialy sy ny fiparitahany eo amin'ny fiainantsika. Saingy ny fampahalalana tena mahaliana dia hita ao amin'ny tapany ambanin'ny sary, izay ahalalan'ny ekipa ny antony tena ampiasantsika ireo tambajotra sosialy. Ary fantaro izay hitan'izy ireo? Mihodina ho an'ny ankamaroantsika, izany ny fihetsem-po
Twitter dia nanambara andiana fisehoan-javatra vaovao izay manatsara ny fisavana sy ny endri-javatra hita. Afaka mikaroka ianao izao ary aseho anao ireo Tweet, lahatsoratra, kaonty, sary ary horonan-tsary mifandraika amin'izany. Ireto ny fanovana: fanitsiana ny tsipelina: Raha diso ny tsipelina nataonao dia hampiseho valiny ho azy ny Twitter noho ny fangatahanao kasaina. Soso-kevitra mifandraika: Raha mitady lohahevitra iray izay ampiasan'ny olona teny maro ianao, dia hanome sosokevitra mifanaraka amin'izany ny Twitter. Valiny misy anarana tena izy
Talata, Jolay 3, 2012 Alakamisy, Jona 18, 2015 Andrew K Kirk
Tsy toy ny endrika marketing mahazatra hafa, ny marketing amin'ny media sosialy dia azo ekena amin'ny tompona orinasa kely toy ny orinasa Fortune 500. Ity infographic ity dia maneho ny fiantraikan'ny media sosialy amin'ny orinasanao.